Col. Cabdullahi Yusuf oo Faramarnaan deg deg ugu soo laabatay Jowhar
Buluugleey, Tuesday, September 20, 2005
Wafdi uu hogaaminayo Col. Cabdullahi Yusuf ayaa maanta ka soo degey degmada Jowhar oo xaruun u ah garabka dagaaloogayaasha taageersan madaxtinimadiisa. Wax uu u sheego uma haynin tageerayaasha garabkiisa, kadib markii uu safar qaatay usbuuc uu ku maqnaa shirkii Qaramada midoobey oo ka dhacay magaalada New York ee dalka Mareykanka. Waxaa ka muuqatey niyad jab iyo guuldarro uu kala soo laabatay Qaramada Midoobey. Markii uu yimid Jowhar wuxuu abaaray hoygiisa halkaas oo uu beerka dhulka dhigay.
Dowladda Mareykanka ayaa siisay Col. Cabdullahi dal ku gal ku kooban magaalada New York, kana codsatay in joogitaankiisu ku ekaado shirka Qaramada Midoobey. Dowlada Mareykanka ayaa aqoonsatay warbixin badan oo ay ka soo gudbiyeen dagaaloogaha Cabdullahi hayado caalamiya iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibeda jooga, taas waxey keentay in dowlada Mareykana ay iska fogeyso iney la yeelato wax wadahadala ama soo dhoweyna. Dowlada Mareykanka oo la tashiyo badan la sameeysay wadamada Carabta iyo kuwa Yurub ayaa go’aansatay ineysan daneyn wax kasta oo uu doonaya dagaaloogahaas lagu eedeynayo inuu 30 sanno ku soo jirey dhiigdaadinta rayidka Soomaaliyeed.
Shir gaar ah ayey wasiirada Arrimaha dibadda ee wadamada Carabta ku yeesheen magaalada New York ee dalka Mareykanka. Shirkaas waxaa si gaara looga hadlayey arrimaha ka jira Soomaaliya. Gabagabadii shirkaas ayaa waxaa la taageeray in sida ay hadda tahay wax walba lagu sii hayo inta laga helayo dowlad ay isku raacsan yihiin ummadda Soomaaliyeed. Ugu dambeystii waxey wasiiradaas Arrimaha dibadda ee dalalka Carabta ka codsadeen Soomaalida in la dhameeyo khilaafka u dhaxeeya garabyada isku haya dowladnimada Soomaaliyeed. Halkaas waxaa ka muuqata in wadamada Carabta ay ku heshiiyeen inaan kaalmo dhaqaale la siin qolooyinka Muqdisho iyo Jowhar isaga soo horjeeda.
Qaramada Midoobey ayaan soo dhoweyn qudbadii uu soo jeediyey Col. Cabdullahi Yusuf. Wakiilo badan ee Wadamadooda u jooga Qaramada Midoobey ayaa ku tilmaamay wararkii Cabdullahi ka jeediyey shirka qaramada midoobey kuwo aan laga soo tashan. Qaramada Midoobey horay waxey u soo jeedisey in Soomaliya ay u baahan tahay in hubka gacanta ugu jira dagaaloogayaasha laga uruuriyo, cunoqabateyna laga saaro hub dibeda looga keeno. Col. Cabdullahi markii uu la tashaday Itoobiya oo shirkaas Mele Zanawi uu u joogey, ayuu madaxdii shirkaas ka codsaday in lala soo gaaro Soomaaliya hub, isaga oo ku macneeyey in dowlada Itoobiya oo diyaar la ah ciidamo dalka Soomaaliya hubka ka dhiga ay u baahan tahay in Qaramada Midowdey ay u fasaxdo iney dalka hub soo geliso, meesha Itoobiya ay codsatay in laga gargaaro dhinaca dhaqaalaha. Itoobiya marka ay ku hubsatay wafdiga ka soo jeeda Soomaalida mariin habaabid siyaasadeed, ayeysan xataa soo hadal qaadin Soomaaliya iskabadaa taageero ay u muujiso fikrada Cabdullahi Yusuf. Hadalkaas wuxuu ku noqday Col. Cabdullahi mid u keenay in aduunyada inteeda kale ay siyaasadiisa aad uga sii jeestaan. Warar isi soo taraya ayaa sheegaya in Col. C/laahi Yuusuf la sheegay safaro uu ku tagi lahaa wadamo badan oo uu ka codsaday caasuumaad markii uu ka qeybgalay shirkii Qaramada Midoobey ineysan soo dhweyn codsigiisa, taasna ay qasb ku noqotay inuu baajiyo isla markaana uu deg deg dib ugu soo laabto magaalada Jowhar.
Waxaa kaloo soo koobay safarkiisa arrimo ka soo cusboonaaday dhinac Jowhar. Ciidankii ka yimid gobolka Bari oo shabeelada dhexe kala kulmay cuduro, qasabna ku noqotay iney galaan dagaal ama ay kala tagaan. Dagaal oogayaasha Muqdisho oo la filayo iney berito ku dhowaqaan isbaheysi ciidan oo ay suurtogal tahay iney deg deg dagaal ula galaan ciidamada ka yimid Bari. Waxaa la xaqiijiyey in Col. Cabdullahi uu qorsheynayo iskudaygii ugu dambeeyey oo uu Muqdisho ku tijaabin lahaa inuu xoog ku galo kaas oo rajadiisa kama dambeystaa ka dhigeysa guul ama guuldarro. Siyaasada uu adeegsanayo waxaa ka mida in la dhaco raashinka saran markabka Qaramad Midoobey ee ku soo xirtay Ceel Macaan si ay ugu noqoto taakulo raashin maleeshiyadiisa. Waxaa kaloo Muqdisho ku soo jeeda siyaasiyiinta garabka Jowhar si ay gudaha Muqdisho uga abuuraan qas iyo cabsi iyo kala jebin lagu abuuro dadka degaanka. Waxaa ugu dambeystii loo adeegsanayaa maleeshiyada dagaaloogaha Jowhar iney dagaalo dhumaaleysiya ka sameeyaan degaanka Xamar. Waxaa hadda la xaqiijiyey in Tikniko iyo ciidamo ka amar qaata maamulka Gobolka Shabeelaha Dhexe ee uu hoggaamiyo Max’ed Cumar Xabeeb (Max’ed Dheere) inay ka ambabaxeen magaalada Jowhar iyagoo ku sii jeeda aagag loo qoondeeyey iney ka soo qaadaan duulaan.
Col. Cabdullahi waxaa u muuqata ama inuu dagaalka ku adkaado ama in looga adkaado halkaasna ay ku dhamaato madaxtinimadii uu ku doonayey inuu ku xukumo qaran Soomaaliyeed. Waxaa guuldarro ku dhamaaday ciidamadii uu dibeda ka codsaday, sidoo kale waxey Qaramada Midoobey, Wadamada Carabta, Yurub iyo Mareykanka ay horistaageen iney soo gaarsiiyaan kaalmo dhaqaale. Waxaa aduunyada laga diidey in la aqoonsado dowladiisii. Garabka siyaasadiisa taageersan waa ay ku adkaatay iney sii joogaan Jowhar. Marka la isku soo wada duubo, Col. Cabdullahi waxaa u muuqatay in dowladiisa lagu kala tegayo sannadkan dhamaadkiisa haddii uusan ka adkaanin qolooyinka ka soo horjeeda. Marka intii uu iska carari lahaa caqligiisu wuxuu siiyey dagaal inuu ku qaado degaanka Muqdisho inta aysan kala tegin maleeshiyada uu kala yimid Bari.